गाडीमा यात्रा गर्दा बान्ता हुन्छ ? यसो गर्नुस । - Rato Pana
काठ्मान्डौं । दशैंमा घर जाने अहिले चटारो छ । सार्वजनिक यातायातमा अहिले दशैं मान्न घर जानेहरुको भिड थेगिनसक्नु हुन्छ । यस्तोमा बसमा यात्रा गर्ने कतिपयलाई बान्ता हुने गर्दछ । प्रायजसो लामो दुरीको यात्रा गर्दा बान्ता हुने गर्दछ ।
कसैलाई यात्रामा निस्कन साथ बान्ता हुन्छ भने कसैमा लामो यात्रा गर्दा यो समस्या देखा पर्दछ । यात्रा गर्ने क्रममा बान्ता हुनु एक कष्टकर क्षण हो । यसले शरीर कमजोर बनाउने मात्र होइन यात्रा नै नरमाइलो हुन्छ ।
बान्ता हुनुअघि देखा पर्ने लक्षण :
– मुखमा पानी आउनु
– छटपटि हुनुु
– पेट बाउडिने आदि
बान्ता हुनबाट बच्न के गर्ने ?
– यात्रामा अनिवार्य खाना खाने ।
– टाढाको दृश्य हेर्ने ।
– चिल्लो कम भएको खानेकुरा खाने ।
– दुग्धजन्य पदार्थ, गुलियो, कोक नखाने ।
यात्रा गर्ने क्रममा ल्वाङ मुखमा राखेर चुस्नाले वाकवाकी र बान्ता हुदैन ।
यात्रा गर्नुअघि अदुवा मिसाएको चिया खाएर यात्रा गरे बान्ता हुदैँन । साथै यात्रामा अदुवाको टुक्रका मुखमा राखेर चपाउँदा पनि बान्त हुदैँन ।
धनियाको केहि दाना मुखमा राखेर चपाउनाले पनि वाकवाकी लाग्दैन ।
जामुनको पात वा फलमा बान्ता रोक्ने औषधीय गुण हुन्छ त्यसैले जामुनको रस निकालेर पिउँदा पनि बान्ता हुदैन ।
लमजुङको भूलभुले केन्द्रविन्दु बनाएर ५.८ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ ।
राइनो युवा क्लब र स्पर्श मल्टिस्पेशलिटी हस्पिटल द्वारा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न ।
Ratopana August 21, 2021 August 21, 2021
पर्सामा थप १ सय ७५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
Ratopana April 30, 2021 April 30, 2021